Nhau - Tsiva iyo "firita chinhu" chemvura yekuchenesa mumba mako. Rangarira kudzoka uye unwe "mvura yakachena"!
Iye zvino mamiriro ehupenyu hwevanhu ari kuita zvirinani uye zvirinani, uye ivo vatanga kuteedzera kunaka kwehupenyu. Kunyangwe iwe uchidya, uchinwa kana kushandisa muhupenyu, unofanirwa kuve wakagwinya, uye kana zvichidikanwa, unoshandisa mimwe michina kubatsira, kuitira kuti iwe ugone kuona kuti zvinodikanwa zvezuva nezuva zvakachengeteka uye zvine hutano.
Mvura chinhu chakakosha muhupenyu hwedu, uye iye zvino vanhu vazhinji varikutanga kuteerera kuchengetedzwa kwekushandisa kwemvura. Kazhinji, mvura iri mudzimba dzedu inotakurwa nemiti yemvura kuburikidza nemapombi. Mhando yemvura iyi inourayiwa utachiona uye inocheneswa, asi mamwe magasi anodzivirira kana zvinhu zvinoramba zviri mumvura, uye pachava nengura mumapombi emvura. Kudurura, uye nekudaro tinopinda muhupenyu hwedu pamwe nepombi uye kuyerera kwemvura.
Izvo zvakare zviri nekuda kwezvikonzero izvi kuti dzimba zhinji dzave kuisa mishonga yekuchenesa mvura kubatsira kuchenesa zviwanikwa zvemvura. Nekuti iyo yekunatsa mvura iine firita chinhu, inogona kutora yakawanda yezvisina kuchena uye mabhakitiriya ari mupombi mvura, kuitira kuti zviwanikwa zvemvura zvinorapwa neanochenesa mvura zvive zvakachengeteka uye zvakachena pakunwa kana pakubika. Nekudaro, nekuti iyo firita chinhu chinoshandiswa kusefa, iyo firita chinhu inodawo kuchinjwa. Inofanira kutsiviwa kangani?
Mazuva ano, mhando dzevanochenesa mvura pamusika dzakasiyana, uye kushandiswa kwechisikigo kwemafirita zvinhu kwakasiyanawo, uye mutengo werudzi roga roga rwekutsiva firita wakasiyana kwazvo. Huahua nhasi anokuudza kangani kutsiva matatu mafirita ezvinhu pamusika. hutano!
1. Yakagadziriswa kabhoni firita
Isu tese tinoziva kuti yakamisikidzwa kabhoni chinhu chine yakasimba adsorption, saka vazhinji vagadziri vemvura yekuchenesa vanoshandisa sechinhu chikuru chemvura yekuchenesa mvura. Kazhinji, painobatidzwa kabhoni sechinhu chesefa, inofanirwa kuve yakakamurwa kuita pre-activated kabhoni uye post-activated kabhoni, kuitira kuti iwo mazinga maviri agone kushandiswa pamwechete kutora hwema hwakawanda uye chlorine mune zviwanikwa zvemvura. Nekudaro, iyo kabhoni yakakwenenzverwa inozozadzwawo mushure mekushandisa kwenguva yakareba, uye inowanzo inoda kuchinjirwa mwedzi mitanhatu yega yega kusvika pagore rimwe.
PP donje rudzi rwechinhu chinosefa maturu makuru mumvura, senge rudzii rwesimbi uye tsvina yesimbi inogona kuvimba nazvo kuti ivharise kunze kwemusuwo. Izvo zvakaenzana ne gauze, rakaputirwa pombi kuti ribatsire mafirita, nekuti zvinhu zvarinomesa zvakakura, saka hupenyu hwebasa huchave hupfupi pane iyo iri kuuya mvura, ingangoita mwedzi mina inoitwa Inotsiviwa.
Paunonzwa zita reiyo ultrafiltration membrane, iwe unofanirwa kuziva kuti iro vhoriyamu rezvarinosefa rinowanzo kuve diki. Mushure mekusaswa, iyo pombi yemvura inogona kushandurwa zvachose kuita yakachena mvura. Nekuda kweiyo yepasi kusefa mhando, iyo yekutsiva nguva inozoita yakarebesa, kazhinji chete kamwe chete makore maviri.
Kana musuki wemvura uchinge washandiswa, chinhu chakakosha ndechekuverenga chinhu chesefa, saka tinofanirwa kuchitsiva nekuchichenesa nenguva, kuitira kuti tione kuti tinonwa mvura yakachena nguva dzese!